Samachar Batika || News from Nepal » भागवद् गीताका केही जीवन उपयोगी सूत्रहरु
भागवद् गीताका केही जीवन उपयोगी सूत्रहरु
धर्म ग्रन्थ अनुसार, कलियुगको आरम्भमा कु’रुक्षेत्रको यु’द्ध भूमिमा कृष्णले गीताको उपदेश अर्जुनलाई दिएका थिए ।
हस्तिनापुरका राजा धृतराष्ट्र( जो आँखा देख्दैन थिए) लाई सञ्जयले महाभारत यु’द्धका क्रममा भएका घ’टना क्रमको वर्णन गर्ने क्रममा प्राप्त भएको हो ।
सञ्जयलाई युद्ध भूमिमा नगई त्यहाँका सबै घ’टना र विवरण देख्नसक्ने दिव्य दृष्टि प्राप्त भएको थियो । गीता यु’द्धको मैदानमा भगवान श्री कृष्णले अर्जुनलाई दिएको दिव्य ज्ञानको रुपमा महाभारतमा व्याख्या गरिएको छ । यसमा १८ अध्याय छन् ।
गीता ऐतिहासिक ग्रन्थ महाभारतको भीष्मपर्व अन्तर्गत दिइएको उपनिषद हो । हिन्दुधर्ममा यसको विषेश महत्व रहिआएको छ । यहाँ हामीले गीताका केही सारहरु उल्लेख गरेका छौं । जुन तपाईंको जिवनमा पनि उपयोगी बन्न सक्छ ।
– आत्माले न कल्यिै जन्म लिन्छ न कहिल्यै म’र्छ नै ।
– चिन्ता र ड’र त्याग : किन व्यर्थ चिन्ता गर्छौ ? को देखि ड’राउदछौ ? तिमीलाई कसले मा’र्छ र ?
गीता ऐतिहासिक ग्रन्थ महाभारतको भीष्मपर्व अन्तर्गत दिइएको उपनिषद हो । हिन्दुधर्ममा यसको विषेश महत्व रहिआएको छ । यहाँ माथी हामीले गीताका केही सारहरु उल्लेख गरेका छौं । जुन तपाईंको जिवनमा पनि उपयोगी बन्न सक्छ ।
प्रकाशित मिति २९ चैत्र २०७६, शनिबार ०२:१२